MyYappyDog: CRM ara-tsosialy ho an'ny mpiasan'ny trano sy trano | Martech Zone
MyYappyDog: CRM ara-tsosialy ho an'ny mpiasan'ny trano sy tany
Alakamisy Oktobra Oktobra 2, 2014 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Misy fanombohana vaovao izay mahazo tanjaka any Indianapolis miaraka Agents amin'ny trano sy tany, ary antsoina hoe Ny Alikako Yappy. Raha afaka manambatra sehatra fifandraisana tsotra maty miaraka amina sehatra fitantanana fifandraisana tsy misy dikany ianao, dia manana CRM ara-tsosialy antsoina hoe My Yappy Dog.
3 amin'ny 4 amin'ireo mpanjifan'ny masoivohon'ny trano no nilaza fa hanao orinasa indray miaraka amin'ny maso ivoho, saingy 15% ihany no manao! Dawn Schnaiter, mpiara-manorina ny Ny Alikako Yappy.
Raha manana vahaolana mora sy tsotra fotsiny ny agents mba hitazonana ny fifandraisany amin'ny mpanjifany dia ho hita izy ireo rehefa mifindra toerana ireo olona ireo, maniry trano lehibe kokoa, na rehefa mitady hamidy ny fianakaviany na ny namany. Ny hany tokony hataon'ny agents dia ny mikasika ny base matetika… ary Ny Alikako Yappy andao hataon'izy ireo izany.
The Sehatra CRM sosialy manasongadina ny fahaizana mandefa amin'ny fantsom-piarahamoninao rehetra, boaty sosialy handraisana sary, fahaizana mandefa sy mandrefy fampielezana mailaka marobe, ary mpitantana atiny. Ny fiaraha-miasa dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiasana kaonty mpanampy (tsy andoavam-bola fanampiny) miaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa manokana momba izay azony atao sy tsy hitany. Ary ny tsara indrindra dia tafiditra ao ny fanaovana tatitra momba ny asanao, ny varotrao ary ny fandanianao!
Ny fahaizan'ny CRM dia tsara, mamela anao hanondro ireo mpanjifa manan-danja indrindra sy handahatra ireo lahasa amin'ny fifandraisana amin'izy ireo matetika.
Kitiho 3 mankany Yap!
Inbox Media Media
Tanjona sy fandaniana
Tahaka ny fanombohana lehibe indrindra, ny My Yappy Dog dia natsangana olona nila filàna - Dawn the Real Estate Agent - Riann Stroud - mpitantana ny vokatra nametraka ny sehatra! Tiako ireo fanombohana namboarina satria sosotra ireo mpampiasa fa tsy nisy vahaolana azo.
My Yappy Dog dia manolotra isam-batan'olona, ​​ekipa ary orinasa Pricing!
Fanamarihana: The Ny Alikako Yappy tena tonga lafatra ho an'ny mpifanaraka na mpamatsy serivisy… ny sehatra efa azo ovaina ny interface
Tags: mailaka Marketingmyyappydogvarotra sy hofa fananana mifakampanome tolotracrm sosialyfitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sosialyboaty sosialympanonta sosialy